प्रचण्ड जहाँ, चर्चा हुन्छ त्यहाँ, तातोपानी कुण्डको महत्व अझै बढ्ने - Everest Dainik - News from Nepal
म्याग्दी, कार्तिक २९ । सोमबार नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयुक्त तस्वीर भाइरल नै बन्यो । तस्वीर थियो म्याग्दीको तातोपानीको । तातोपानी कुण्ड धार्मिक, पर्यटकीय र स्वास्थ्यका दृष्टिले चर्चित स्थान । प्रचण्ड र बादल सपरिवार पुगेका थिए तातोपानी कुण्डमा । उद्देश्य थियो– स्वास्थ्योपचार । अध्यक्ष प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्यमा सुधार आउने अपेक्षा सहित उनीहरु तातोपानी कुण्ड पुगेका थिए । र, उनीहरु कुण्डमा नुहाएको तस्वीर मिडियामा भाइरल बन्यो ।
कतिपयले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिए, केहीका लागि यो प्रचण्डको आलोचना गर्ने सदाबाहरको सूत्र बन्यो । जबकि स्थानीय दृष्टिमा प्रचण्डको यो भ्रमण निकै महत्वपूर्ण थियो । राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा रहेका राजनीतिज्ञ तातोपानी कुण्डमा नुहाउन आउनु नै ठूलो कुरा थियो ।
प्रचण्डहरु तातोपानी पुग्दा सबैभन्दा खुसी थिए बिरेन्द्रमान शाक्य । शाक्य तातोपानी कुण्ड ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुन । समितिका पदाधिकारीले तातोपानी कुण्डको ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्वबारे जानकारी गराउँदै यो कुण्डलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न विशेष पहलका लागि अनुरोध गरे ।
‘उच्च राजनितिक तहका व्यक्तित्व र उहाँका परिवार स्नानका लागि आएकाले तातोपानी कुण्डको महत्व अझै बढ्ने र प्रचारप्रसार हुने विश्वास छ”, अध्यक्ष शाक्यको प्रतिक्रिया थियो, “तातोपानी कुण्डलाई अन्तराष्ट्रियीय स्तरको प्राकृतिक उपचार र पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गराउन प्रस्ताव गरेका छौं ।”
प्रचण्ड तातोपानी पुगेर यो कुण्ड अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना रहेको तथ्यलाई स्थानीयले राम्रैसँग बुझे । यद्यपी प्रचण्डको आलोचना गर्न पल्केका आलोचकहरुका लागि भने उनको भ्रमण पाच्य भएन । त्यसो त प्रचण्डका हरेक गतिविधिमा केही न केही खोट निकाल्न खोज्नेहरुका लागि तातोपानीमा नुहाउनु गर्वको विषय बन्नु पर्ने हो । तर त्यो पनि भएन । उनीहरुले आलोचना गरे ।
जसले जे जसरी यो भ्रमणलाई लिएपनि पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री बादल तातोपानी कुण्डमा पर्याप्त समय दिएर बस्नुले तातोपानी क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पुग्नेमा शंका गर्ने कुनै आधार देखिन्न ।
तातोपानी हुदै म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रलाई जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक कालोपत्रे योजनालाई पूर्णता दिने, कुण्ड र बजारलाई म्याग्दी नदीको कटानबाट जोगाउन संरक्षण योजनालाई प्राथमिकता दिने विषयमा स्थानीय तहबाट गरिएको अनुरोधलाई मात्रै प्रचण्डहरुले केन्द्रीय सरकारसँग पहल गरिदिए यो कुण्डको विकासमा ऐतिहासिक कोशेढुंगा बन्न सक्छ ।
यातायात सहज पार्न सकिएको खण्डमा मात्रै तातोपानी आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको हब बन्न सक्छ । सयौंले रोजगार पाउन सक्छन्, देशले राजस्व पाउन सक्छ । यही राजस्वबाट देशले विकास र समृद्धिका योजना अगाडि बढाउन सक्छ । गत वर्ष १६ हजार ९०० जनाले उपचारका लागि स्नान गरेका कुण्डमा थप पाँच हजार जना अवलोकन भ्रमणका लागि आएका थिए । यदि प्रचण्डको यो भ्रमणले यो संख्यामा बृद्धि हुन्छ र कुण्डको पनि थप संरक्षण र सम्बद्र्धन हुन्छ भने आलोचना गर्नुको कुनै तुक छ र ?
बिरेनुनको गन्धमा निस्कने तातोपानी संकलन गरिएको कुण्डमा स्नान गरेमा ग्यास्ट्रिक, गानो गोला, चोट पटक लागेको, सर्के मर्केको, नशा, हाडजोर्नी सम्बन्धि समस्या निको हुने जनविश्वास छ । यो कुराको वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनुपर्ने अर्को पाटो बाँकी नै छ । तर अहिले जसरी अस्पतालहरुमा उपचार गराउँदा समेत निको नभएको रोग तातोपानीमा स्नान गरेर स्वास्थ्य लाभ भएको उपचारका लागि आएको कतिपयले बताउँछन, त्यो कुरालाई थप प्रचार गर्न सकियो भने यसले तातोपानीको भविष्य कायापलट हुन सक्दैन र ?
कुण्डले गत वर्ष विद्यालयका शिक्षकको तलबका लागि २२ लाख रुपैया उपलब्ध गराएको थियो । यो सामाजिक सेवामा ठूलो योगदान हो । प्रचण्ड मात्र हैन, अन्य नेता, कलाकार, खेलाडी, व्यापारी व्यवसायी, सञ्चारकर्मी सबैले यसरी तातोपानी जाने हो भने हामीले पर्यटनका लागि विदेश चाहार्नुपर्दैन ।
प्रचण्ड तातोपानी मात्र गएनन, उनले समग्र म्याग्दीको विकासका लागि स्थानीयसँग छलफल समेत गरे । साथै त्यहाँका स्थानीय बिभिन्न स्थानको अवलोकन गरे । स्थानीयसँग छलफल गरे । म्याग्दीजस्तो उपेक्षित र दुर्गम जिल्लाका लागि यो अवसर हो कि होइन ? बाहिरबाट आलोचना गर्नु जति सजिलो छ, स्थानीय जनताले के अनुभूति गरिरहेका छन् त्यो नबुझिकन आलोचना गर्नुको कुनै अर्थ भने हुन्न ।
प्रचण्ड अहिले पत्नी सीताको स्वास्थ्यलाभका लागि त्यहाँ पुगेका छन् । नेकपाका अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा शक्तिशाली व्यक्तित्व प्रचण्डले तातोपानीलाई त्यसरी महत्व दिनु भनेकै कुण्डको महत्व बढ्नु हो । यसलाई आलोचना या टिप्पणीको विषय बनाउनुको कुनै अर्थ देखिन्न ।
ट्याग्स: cpn, myagdi, Parchand, Tatopanee